Root ary apetraho ny fanarenana amin'ny Xperia U | Androidsis
Androany avy amin'ny Androidsis, manome anao ny lalana hamongorana sy hametrahana a famerenana ao amin'ny anao Sony Xperia U. Mba hamongorana azy io dia tsy maintsy manana ny kinova farany farany isika, manaraka ity manaraka ity tutorial azontsika atao ny mametraka azy amin'ny findaintsika.
Andao atomboka ny tutorial mba hahafahantsika mamaka ny Sony Xperia U. Ity manaraka ity dia miasa ihany voahidy bootloader.
Kernel firmware .54
Hamoaka ny kernel nu amin'ny fitaovana Flashtool izahay.
Rehefa vita ny fizotrany dia hamerina amin'ny laoniny ny finday izahay.
Ankehitriny dia manazava ny kernel izahay .54
Miandry ny famaranana ny fizotrany isika, mamelona ny finday ary hamaka azy io isika.
Hanohy hametraka a izahay izao famerenana amin'ny finday miorim-paka. Inona no atao hoe fanarenana? Izy io dia menio ahafahantsika manova ny ampahany amin'ny rafitra. Afaka mampihatra MODS isika, mamafa ny angona (WIPE), mametraka ROMS, manao BACKUPS, sns.
Esorinay izy io ary tantinay
Raha tsy dia manana hevitra firy momba ny voambolana ampiasaina amin'ny Android ianao dia afaka mijanona eo akaikinay Rakibolana Android ary mahatratra.
Fanazavana fanampiny - Ampidiro ny Sony Xperia U anao, Rakibolana Android
Fampidinana - Flashtool, kernel nu, kernel .54 , File ho an'ny faka, File raha sitrana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Xperia U, Root ary fanarenana
Fa ahoana ny android 2.3.7?
Ho an'ny Android 4.0.4 ihany
Oskar Andres Lindo Del Prado dia hoy izy:
Salama hariva, ny zava-nitranga dia ny fanavaozana ny Xperia U ho an'ny Android 4.0.4, saingy mandany RAM be loatra izy io ary tena miadana amin'ny hetsika rehetra, tena ilaina tokoa ny 10 segondra vao maka sary. Mety ho azonao ampitaina amiko ny kinova voalohany (2.3.7)!
Io dia satria tsy hitako izy ary tsy fantatro fa alohan'ny fanavaozana azy dia tsy maintsy tehiriziko ilay kinova taloha.
Ny mailako dia: oskardelprado@live.com
Valiny tamin'i Oskar Andres Lindo Del Prado
Mitranga izany isaky ny apetraka ny kinova vaovao, tsy maintsy avelanao hilamina ny firmware vaovao
Azafady, tompokolahy, saingy naharitra roa herinandro mahery aho tao anatin'izany toe-javatra izany!
Saika hoentiko any amin'ny serivisy teknika Movistar hamerenako azy amin'ny kinova taloha tany Bogotá ... saingy satria 15 andro niasana no nilaiko ary nilaiko tamin'ny asa sasany aho dia tsy nanao izany!
Fa efa azoko ilay kinova taloha fa ny eropeana ihany !!!
Fa misaotra ihany !!!
Yasmine dia hoy izy:
Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba nanovanao ilay kinova 2.3.7 teo aloha? Esque navaozina ho 4.0.4 ary miadana be! Tena mahadomelina tokoa, manampy: c
Valiny tamin'i Yasmina
macamhe dia hoy izy:
Fanontaniana iray, efa manana ny telefaonako nipaoka hatramin'ny omaly aho miaraka amin'ny kinova farany (4.0.4) .Mila mamaky indray ve ilay fisie »kernel nu omenao eto sa afaka mandeha mivantana mankany amin'ny dingana 3 aho?
Mamaly an'i macamhe
Mamelatra ny kernel, tsy mamafa ny zava-drehetra izany ary mamonjy ny olana mety hitranga ianao
Nataoko daholo ireo voalaza etsy ambony ireo fa rehefa apetrakao ny Menu Fanarenana ary tsindrio matetika ny fanalahidin'ny volume, dia mijanona ny Sony Logo ary tsy miditra amin'ny menio fanarenana izany? inona ny lasa? Mametraka azy indray aho?
Raha tsy mety aminao izany dia avereno.
Manana fanontaniana aho!! Izy io dia miasa ho an'ny maodely ST25a na ny maodely ST25i ??? Fa maninona eto Amerika Latina no maodely faha-25 ??? valio haingana azafady !!! Avy any Uruguay aho !!!
Tamin'ny voalohany, ny ST25i dia natao ho an'ny kinova iraisampirenena, hahalalanao ny modely inona no fijerinao ny Settings / About phone
Ny maodeliko dia ST25a, midika ve izany fa tsy vitako izany?
Eny, azonao atao, satria ny kernel ihany no alefanao fa tsy ny firmware rehetra
Ny maodeliko dia ST25a, midika ve izany fa tsy mety amiko ireo rakitra handehanany azy ireo ??? Ary raha manova ny KERNEL.54 ho an'ny kernel.10 aho izay avy amin'ny ST25a, vitany ve izany sa tsy mifanaraka amin'ilay kernel nu?
Miezaha aloha mampiasa ny programa mivantana, mandingana ny dingana kernel
Tsy hamela ahy hametraka faka izy io satria tsy eo ny mpamily adb. Avy aiza aho no misintona azy?
Izany dia satria tsy manana ireo mpamily finday napetraka tsara ianao. Mandehana mankany amin'ny folder flashtools ary apetraho ireo mpamily izay miseho eo
amin'ny pc sa aiza?
Salama, tsy haiko raha mifanitsy amin'ity lahatsoratra ity ny fanontaniako, fa te hahafantatra zavatra manana xperia U ICS 4.0.4 aho; 6.1.1.B.10 ary tiako ny manavao azy amin'ny kinova 6.1.1.B.54 Avy any Ekoatera aho ary ny maodeliko dia ST25a. Ahoana no fomba anaovako azy? Misy lahatsoratra amin'ity tranonkala ity ve manondro an'io fanavaozana io? Mankasitraka ny fandraisana anjara aho !!!! Misaotra anao!!!!
Maikel dia hoy izy:
Olaa manana Xperia U aho ary indrisy fa havaoziko amin'ny android 4.0.4 ary te hiverina amin'ny kinova izay nentiko finday aho, azafady mila fanampiana aho misaotra !!
Valiny tamin'i Maikel
Salama ami, ny zavatra mitovy amiko no nanjo ahy, fa ianao kosa mila mampirehitra azy, ny tiako holazaina dia ny mametraka efitrano misy ny kinova gb, mikaroha ao amin'ny FB, vondrom-piarahamonina antsoina hoe xperia latinos, ary ao no hahitanao ny fiparitahana azy, ary ny fomba fametrahana ny efitrano, raha ny amiko dia tsara ho ahy satria tel ny ahy ary nahita ilay efitrano tany am-boalohany aho, ny tokony ho tadidinao dia ny hamafana ireo rakitra multimedia rehetra, noho izany dia mamporisika anao aho hametraka azy ireo amin'ny solo-sainao ary avereno indray izy ireo
fanontaniana ara-nofo dia hoe very hevitra aho !! : Ny programa 7zip ve dia an'ny pc na finday? Tsy mahay manao izany ve i winrar?
Ho an'ny pc, ny programa dia atolotry ny mpamorona
00luis7 dia hoy izy:
rehefa mamerina ny finday aho dia tsy misy dikany izany, mivoaka ny fanazavana ny fomba hamerenana ny x10 ary mijanona eo mandrakizay izy, inona no lasa !!!!
Valiny amin'ny 00luis7
wolftecno dia hoy izy:
esory ny tariby avy amin'ny sisiny pc sy ny cel dia ampifandraiso ny lafiny cel ary tazomy ny lakilen'ny vol minus raha mampifandray ny usb amin'ny pc ianao ary ekena eo amin'ny switch
Mamaly an'i wolftecno
Fanontaniana iray, raha esoriko amin'ny fomba lazainao na amin'ny hafa izany, very ny data-ko?
Tsia, tsy maintsy hamafana ny angon-drakitra ny tsy maintsy hongotantsika sy hametrahana sitrana. Raha hametraka rom vaovao dia very ny angona satria mila manao ny mamafa ianao hametrahana azy.
Manana xperia U aho, ary manana olana, miadana be izy io ary saika tsy manana rindranasa aho na izay toa ao an-tsaiko, indraindray miditra ny fandefasana hafatra aho ary miseho ny famantarana izay manery ahy hanery akaiky ny fampiharana tsy ampiasaina. , mila fotoana ary tafahitsoka indraindray, FANAMPIANA !!!
tsara !! Nety tsara tamiko !! misaotra betsaka 😀
Mamaly an'i Tomi
Feliciano dia hoy izy:
Miezaka ny manongotra ny findaiko aho ary tsy misy fomba ahazoako izany hatrany amin'ny script:
hadisoana: fitaovana sy emulator mihoatra ny iray
Afaka manampy ahy ve ianao? Toa hitako fa efa nanandrana tamin'ny fomba rehetra azo atao aho.
Valiny tamin'i Feliciano
mba hamelenantsika azy indray miaraka amin'ny karnel 54.?
tsara; Rehefa mihazakazaka ilay programa nataoko sintomina aho dia nipoitra ilay angano "tsy hitan'ny rafitra ny lalana voafaritra". Inona no tsy nety nataoko?
Victor zaldivar dia hoy izy:
Tena tsara, misaotra miasa tonga lafatra
Valiny tamin'i Victor Zaldivar
Sary placeholder Axeliito Ruiz dia hoy izy:
ny fanontaniana dia tsy mety ho horonan-tsary
Valiny tamin'i Axeliito Ruiz
Eduardo Vega dia hoy izy:
Nijanona tamin'ny sary famantarana ny zanakalahy…. Inona no azoko atao ???
Valiny tamin'i Eduardo Vega
Amin'ireto dingana ireto dia efa namoaka ny findaiko aho? , esque maka fotsiny mba hifindra ary te-hanova azy aho mba ho mazava, avy any Peroa aho, azafady mba ampio aho
william oyano dia hoy izy:
Tsy mazava mihintsy aloha fa tsy milaza aminao raha maty na mandeha ary tsy mazava fa adiny iray aho ary tsy misy zavatra mitranga rehefa miditra amin'ny faka ianao dia milaza aminao fa tsy mahita ny lalana voalaza ny rafitra, ka ny tsy mazava ny dingana teo aloha
Mamaly an'i guillermo oyano
Salama, napetrakao fa io dia ampiasaina amin'ny "bootloader voasakana", fa ny flashtool tsy hamela anao ho voasakana, fa tsy voavaha fotsiny
Nesoriko ny dingana voalohany ary tsy hitako intsony ny fomba hiverenana, ahoana no anaovako azy?
Jhoser dia hoy izy:
Tsy mandeha intsony ny rohy fisie? Tsy afaka maka azy aho.
Mamaly an'i Jhoser
Inona ny firmware naorinao? Ananako ny. .54